မိုဗစ်ရဲ့ လေလုံးထွားမှုက အမေရိကန်သမ္မတ ထရန့်တောင် ကောင်းကောင်းမနေရဘူး
(၁၀)နှစ်လောက်ကတည်း အမေရိကန်ကို ရောက်ခဲ့ရင် သမ္မတတောင်ဖြစ်နေပြီလို့ ကြွားဝါခဲ့တဲ့ Ibrahimovic
23 Jul 2018 . 4:58 PM
LA ဂလက်ဆီအသင်းရဲ့ ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic ကတော့ စကားကြီးစကားကျယ် ပြောလိုက်ပြန်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ တကယ်လို့ သူသာ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)လောက်ကတည်းက အမေရိကန်နိုင်ငံကို ခြေချခဲ့မယ့်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ သမ္မတလောက်အထိဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ အရင်ကတည်းက လေလုံးထွားခဲ့သူဖြစ်ပေမယ့် သူပြောတဲ့စကားအတိုင်း အောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့လို့ လူအထင်ကြီးရုံသက်သက် ပြောဆိုတတ်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကဆိုရင် သူ့ကိုယ်သူ ခြင်္သေ့ ၊ ဘုရားသခင် (God)တို့နဲ့ တင်စားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ပြောစကားတွေကလည်း မီဒီယာတွေအတွက် သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကုန်က မန်ယူနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီး မေဂျာလိဂ်ကလပ် LA ဂလက်ဆီအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူဖြစ်သလို အသင်းအတွက် (၁၅)ပွဲကစား (၁၂)ဂိုးသွင်းယူထားလို့ အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြသနေတယ်လို့လည်းဆိုရမယ်။ မီဒီယာတွေက အမေရိကန်ဘောလုံးလောကကို ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီလားလို့ အီဘရာဟီမိုဗစ်ကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး သူက”အဲဒါတော့ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတော့ လုပ်ပြနေတာပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကတည်းက အမေရိကန်ကို ကျွန်တော် မရောက်ခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်၊ မဟုတ်ရင် အခုအချိန်လောက်ဆို ကျွန်တော် အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်နေလောက်ပြီ”လို့ ဖြေခဲ့တာပါ။
အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းကလည်း CNN သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ထရန့် Donald Trump အပေါ် သူ့ရဲ့အမြင်ကို မေးမြန်းခဲ့တော့ “ကျွန်တော် စိတ်မ၀င်စားဘူး”လို့ ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့သာ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်ကတည်းက အမေရိကန်ကို အီဘရာဟီမိုဗစ် ရောက်လာခဲ့ရင် သူ့ရဲ့အရှိန်အ၀ါကြောင့် သူပြောသလို အမေရိကန်သမ္မတများဖြစ်နေမလားပဲ . . .
ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် အီဘရာဟီမိုဗစ် ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားများ
Photo:The Sun,Sky Sports,.cdn
(၁၀)နှဈလောကျကတညျး အမရေိကနျကို ရောကျခဲ့ရငျ သမ်မတတောငျဖွဈနပွေီလို့ ကွှားဝါခဲ့တဲ့ Ibrahimovic
LA ဂလကျဆီအသငျးရဲ့ ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic ကတော့ စကားကွီးစကားကယျြ ပွောလိုကျပွနျပါပွီ။ အဲဒါကတော့ တကယျလို့ သူသာ လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)လောကျကတညျးက အမရေိကနျနိုငျငံကို ခွခေခြဲ့မယျ့ဆိုရငျ အခုအခြိနျမှာ သမ်မတလောကျအထိဖွဈနပွေီလို့ ဆိုခဲ့တာပါ။ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ အရငျကတညျးက လလေုံးထှားခဲ့သူဖွဈပမေယျ့ သူပွောတဲ့စကားအတိုငျး အောငျမွငျမှုတှရေယူနိုငျခဲ့လို့ လူအထငျကွီးရုံသကျသကျ ပွောဆိုတတျသူတော့ မဟုတျပါဘူး။ အရငျတုနျးကဆိုရငျ သူ့ကိုယျသူ ခွင်ျသေ့ ၊ ဘုရားသခငျ (God)တို့နဲ့ တငျစားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ပွောစကားတှကေလညျး မီဒီယာတှအေတှကျ သညျးခွကွေိုကျဖွဈခဲ့ရတယျ။
အသကျ(၃၆)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကုနျက မနျယူနဲ့လမျးခှဲခဲ့ပွီး မဂြောလိဂျကလပျ LA ဂလကျဆီအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့သူဖွဈသလို အသငျးအတှကျ (၁၅)ပှဲကစား (၁၂)ဂိုးသှငျးယူထားလို့ အသကျအရှယျနဲ့မလိုကျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျပွသနတေယျလို့လညျးဆိုရမယျ။ မီဒီယာတှကေ အမရေိကနျဘောလုံးလောကကို ပွောငျးလဲနိုငျခဲ့ပွီလားလို့ အီဘရာဟီမိုဗဈကို မေးမွနျးခဲ့ပွီး သူက”အဲဒါတော့ ကြှနျတျောမသိဘူး။ ကိုယျလုပျစရာရှိတာတော့ လုပျပွနတောပဲ။ လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈကတညျးက အမရေိကနျကို ကြှနျတျော မရောကျခဲ့တာ ကံကောငျးတယျ၊ မဟုတျရငျ အခုအခြိနျလောကျဆို ကြှနျတျော အမရေိကနျသမ်မတဖွဈနလေောကျပွီ”လို့ ဖွခေဲ့တာပါ။
အီဘရာဟီမိုဗဈဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးကလညျး CNN သတငျးဌာနနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ လကျရှိအမရေိကနျသမ်မတ ဒျေါနယျလျထရနျ့ Donald Trump အပျေါ သူ့ရဲ့အမွငျကို မေးမွနျးခဲ့တော့ “ကြှနျတျော စိတျမဝငျစားဘူး”လို့ ဖွခေဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျလို့သာ လှနျခဲ့တဲ့(၁၀)နှဈကတညျးက အမရေိကနျကို အီဘရာဟီမိုဗဈ ရောကျလာခဲ့ရငျ သူ့ရဲ့အရှိနျအဝါကွောငျ့ သူပွောသလို အမရေိကနျသမ်မတမြားဖွဈနမေလားပဲ . . .
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ အီဘရာဟီမိုဗဈ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမြား